नेकपाको सचिवालय बैठकमा चर्काचर्की « Rara Pati
नेकपाको सचिवालय बैठकमा चर्काचर्की
१६ मंसिर, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बाझाबाझ भएको छ। बैठकको सुरुवातमै प्रधानमन्त्री ओलीले महासचिव विष्णु पौडेलको ६२ औं जन्मदिन भएकाले शुभकामना दिऔं भन्दै केट काट्न लगाएका थिए ।
महासचिव विष्णु पौडेलको जन्मदिनको केक काटिसकेपछि अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्र ओलीले बैठक सुरु भएको बताउँदै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डतिर हेर्दै आजको एजेण्डाचाहिँ के हो नि ! भनेर ठाडो रूपमा प्रश्न गरे । जवाफमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी जटिल मोडमा रहेको भन्दै दुबै प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए ।
तर, ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव लाञ्छना–पत्र मात्रै भएको र यसले पार्टीको शाख गिराउने काम गरेको प्रतिक्रिया दिए । यसमाथि पार्टीमा छलफल हुन नसक्ने भन्दै उनले प्रस्ताव फिर्ता लिएर प्रचण्डले माफी माग्नुपर्ने भने । प्रचण्डको प्रस्ताव सहित दुई नेताहरुको पत्रलाई बुकलेटका रुपमा प्रकाशित गरेर वितरण गरेकोमा पनि प्रचण्डले माफी माग्नुपर्ने ओलीले अडान राखे ।
ओलीले आफ्नो प्रस्तावमा उल्लेख गरेजस्तै पार्टीमा बहुमत वा अल्पमतका आधारमा नभई सहमतिबाट मात्र निर्णय हुनुपर्ने बताए । सहमतिका आधारमा अगाडि नबढ्ने हो भने पार्टी एकता कायम रहन नसक्ने बताउँदै ओलीले बैठकमा भने, ‘अन्तरिम कमिटीमा बहुमत–अल्पमत भन्ने हुँदैन र मान्दिनँ पनि ।’
प्रचण्डले आफूमाथि लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै आलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्नँ’ भने । उनले त्यसो भनिरहँदा प्रचण्ड भने मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए । त्यो देखेपछि आक्रोशित बनेका ओलीले भने, ‘किन हाँसेको ? म गम्भीर कुरा गरिरहेको छु ।’ त्यसपछि प्रचण्डले भने, ‘अध्यक्ष ओलीले उत्तेजित बनाउने गरी बोलेको तर आफूहरु उत्तेजित नभई शान्तपूर्वक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न चाहेको बताए । उनले यसो भनिरहँदा अध्यक्ष ओलीले तत्कालै प्रतिवाद गरे । जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने ? भन्दै उनी प्रचण्डमाथि आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भए।
त्यसपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि ओलीको अर्को विरोध गरे । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘बोल्न पनि नपाइने ?’ भन्दै ओलीको प्रतिवाद गरे । ईश्वर पोरेखलले पनि बोल्नै नपाउने त भएन भन्दै बैठकमा ओलीको आलोचना गरेका थिए । नेताहरुले एकसाथ लागेर ओलीको प्रतिवाद गरेपछि प्रचण्डले सम्हालिएर आफ्ना कुराहरु राखे ।
‘पार्टीमा बोल्नसमेत नदिने स्थिति छ, आएका प्रस्तावहरुमाथि छलफलै हुन्न भन्नुहुन्छ, साथीहरु आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुस्’ भन्दै प्रचण्डले छलफलका लागि आह्वान गरे ।
वरिष्ठ नेता नेपालले छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नै उठाउन आवश्यक नरहेको र बैठकमा आएका प्रस्तावहरुमाथि छलफल हुनैपर्ने बताए ।
वरिष्ठ नेता खनालले बैठकमा आएका सबै प्रस्ताव पार्टीको सम्पत्ति भइसकेको बताए । उपाध्यक्ष गौतमले छलफल त सुरु भइसक्यो र अध्यक्ष केपी कमरेडले पनि भाग लिइसक्नुभयो भने ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले छलफल गर्न पाइन्न भन्ने पनि हुन्छ र ? भन्दै प्रश्न गरे । नेता ईश्वर पोखरेलले प्रस्तावहरु आएपछि त छलफल हुने नै भयो भने । रामबहादुर थापा बादलले पनि छलफल त सुरु भइसकेको छ भने ।
केपी ओली कुण्ठाग्रस्त बनेको र व्यक्तिवादी भएको भन्दै प्रचण्डले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गरेका छन् । साथै उनले ३७ पृष्ठको प्रस्तावमा ओलीले आफूमाथि लगाएका आरोप र उठाएका प्रश्नहरुको बुँदागत रुपमा लिखित जवाफ दिने प्रचण्डले बताएका छन् ।
स्रोतका अनुसार मंगलबारको बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।
सहमतिका आधारमा मात्र निर्णय हुनुपर्छ भन्ने ओलीको अडानको खनालले कडा आलोचना गरे । सकेसम्म सहमति, नभए बहुमतबाट निर्णय हुने भन्दै उनले दुनियाँमा कहीँ नभएको अभ्यास हुनुपर्छ भन्दा नीतिगत संकट आउने बताए । सहमति भनेको के हो ? यसको परिभाषा हुनुपर्ने खनालले बताए ।
उपाध्यक्ष गौतमले पनि बैठकसँगै अनौपचारिक छलफलहरु गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । ईश्वर पोखरेलले पनि अनौपचारिक सम्वादमा जोड दिए । प्रवक्ता श्रेष्ठले अनौपचारिक सम्वादहरु गर्नुपर्ने, तर त्यसका नाममा औपचारिक बैठकलाई रोक्न नमिल्ने धारणा राखे।
बैठकमा धेरै नै बाझाबाझ भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरुले पार्टीका सबै बैठक ५÷१० दिन रोकेर सहमति खोज्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, अरु नेताहरुले अनौपचारिक सम्वाद पनि गर्ने तर बैठक रोक्न नमिल्ने धारणा राखे । बरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालले बैठक रोकेर ओली पक्ष भाग्न खोजेको आरोप लगाए ।
नेताहरुको धारणा सुनेपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले भोलि (बुधबार) १ बजे फेरि सचिवालय बैठक बस्ने जानकारी दिए । तर, अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली ‘यस्तो बैठक केका लागि रु’ भन्दै उठेको एक नेताले सुनाए ।